Rypple: Nzaghachi, Nkuzi na Nghọta | Martech Zone
Anyị emeela mgbanwe gaa na arụ ọrụ na Yammer izu ole na ole gara aga ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọbụna taa, Marty nọ n'ọfịs, Stephen na-arụ ọrụ abalị niile n'ụlọ, m nọ na Ball State, Nikhil nọ na India na Jenn na-arụ ọrụ n'ụlọ. Iji mee ka ozi mara anyị, anyị na-emelite Yammer iji mee ka ibe anyị mara ebe anyị nọ, ihe anyị na-arụ ọrụ na ya, na ihe anyị chọrọ enyemaka. Ọ bụ ezigbo mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta anyị na nzukọ anyị.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnwe mkparịta ụka ndị ahụ ma tinye ntọala ebumnuche, nkuzi, mmata na nzaghachi, agbanyeghị? Nke ahụ bụ ihe Rypple nwere olile anya imezu arụmọrụ mmekọrịta ikpo okwu. Niile na ahụmịhe onye ọrụ nke yiri Facebook, yabụ ọ dị mfe iji. Rypple na-echetara m nke ukwuu Yammer, ma na-atụmatụ ndị ọzọ maka otu ụlọ na ude.
Ebe ọrụ taa na-achọ ụzọ ọhụụ maka njikwa arụmọrụ. Rypple bụ usoro ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntanetị nke na-enyere ụlọ ọrụ aka melite arụmọrụ site na ebumnuche mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nzaghachi na-aga n'ihu na mmata bara uru.
Ọ bụrụ na ị nwere ike iwekọta ọrụ ọrụ gị, idebe ebumnuche na nzaghachi ozugbo na CRM gị? Can nwere ike kemgbe Salesforce zụtara Rypple na February. Rypple jikọtara ya na Ndị ahịa (na Nkata). Ọ dịkwa mobile-dị njikere.
Ikpebi Facebook na Twitter ROI